IFAD-VCDP Ekesàárala Ndị Ọrụ Ugbo Anambra Mkpụrụ Akụkụ | Igbo Radio
IFAD-VCDP Ekesàárala Ndị Ọrụ Ugbo Anambra Mkpụrụ Akụkụ
N'iji kwàdo ha n'ezi ọrụ ha ịhụ na a nwere nri gbàà-nyụụ na steeti Anambra, òtù na atụmatụ ọrụ 'International Fund for Agricultural Development assisted Value Chain Development Programme (IFAD-VCDP)' ekesàárala ndị ọrụ ugbo steeti Anambra mkpụrụ akụkụ ọrụ ugbo dị iche iche.
Mkpụrụ akụkụ ọrụ ugbo ahụ bụ nke mkpokọta ọnụ ego ya ruru puku kwùrú puku naịra, ma bụrụkwa nke e kesààra ndị ọrụ ugbo sitere okpuru ọchịchị ime obodo asatọ n'ime steeti ahụ, bụ ndị nọ n'okpuru atụmatụ IFAD-VCDP na gọọmenti etiti.
Mmemme ikesà ihe ahụ bụ nke weere ọnọdụ n'Atanị, dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Ọgbaru, ma bụrụkwa nke a nọrọ na ya wee gbapee atụmatụ nkesà mkpụrụ akụkụ ọrụ ugbo ndị IFAD-VCDP nke ahọ 2020 na steeti Anambra.
N'okwu ya oge ọ na-agbape atụmatụ ikesa ihe ahụ, aka na-achị steeti Anambra, bụ Gọvanọ Willie Obianọ, nke onye nọchitere anya ya bụ Kọmishọna na-ahụ maka ọrụ ugbo na steeti ahụ, bụ Maazị Nnamdi Onukwuba kọwara nke ahụ dịka otu ụzọ pụtara ìhè a pụrụ isi kwàdo ọrụ ugbo n'ime steeti ahụ.
Ọ dọrọ ndị ọrụ ugbo ahụ ketara òkè ahụ aka na ntị ka ha gharakwa ịnwà ànwà ree ihe ahụ ha kètàrà ụbọchị ahụ n'ahịa, n'ihi na onye ọbụla mere ihe dị etu ahụ agaghị eso rita úrù n'ihe nkesà ndị ọzọ a ga-eme n'ọdịnihu. O nyekwazịrị ha ndụmọdụ ka ha ga kụnye maọbụ tinye mkpụrụ akụkụ ugbo ahụ n'ọrụ ozigbo ozigbo; gwa ha ka ha jisie ike n'ọrụ ugbo ha; ma dọkwazie ha aka na ntị ka ha gbaa mbọ na-erube isi na ntuziaka niile e nyere maka ọrịa nje korona, iji zèéré ibute ya.
Na mbụ n'okwu ya, onyeisi atụmatụ FG/IFAD-VCDP na steeti ahụ, bụ Maazị Nnamdi Agwuncha mèrè ka a mara na ndị ahụ ketara mkpụrụ akụkụ ọrụ ugbo ahụ ga-akwụ naanị pasenti iri atọ n'ime ọnụ ego mkpụrụ akụkụ ọrụ ugbo ahụ ha kètara, ebe FG/IFAD-VCDP ga-akwụtọpụzị nke fọrọ afọ.
N'okwu ha n'ótù n'ótù, ụfọdụ ndị soro keta ihe ahụ ụbọchị ahụ, nke gụnyere Maazị Obi Ezeani, na Oriakụ Blessing Mbanefo kèlèrè gọọmenti etiti, gọọmenti Anambra, na IFAD-VCDP maka nke ahụ, ma kwezie nkwà iji ihe ahụ ha ketara mepụta ihe dara ụdà n'ebe ịkọ ọrụ ugbo ha dị.
Ihe e kesààrà ha ụbọchị ahụ gụnyèrè nriala, bụ fetịlaịza, ọgwụ e ji agbawu ihe na-atagbusi ihe a kọrọ n'ugbo, mkpụrụ osikapa, na okpòrò akpụ.